Ungasikhetha kanjani isiteshi sezulu? | Isimo Sezulu Senethiwekhi
UMonica sanchez | | Izinsimbi Zomkhathi
Uma ungathanda ukwazi isimo sezulu endaweni yangakini, ngincoma ukuthi uyithole Isiteshi Sezulu. Ukusetshenziswa kwayo kulula, futhi kuyithuluzi eliwusizo kakhulu elizokusiza kakhulu kunokwazi ukuthi yiziphi izingubo okufanele uzigqoke namuhla.
Kepha kunenkinga encane: kunamamodeli amaningi wemikhiqizo ehlukahlukene enamanani ahluke kakhulu, ngakho-ke ukukhetha okufaneleka kakhulu kuwe kungaba umsebenzi omncane. Ukuze kungabi njalo, ngizochaza ukuthi singasikhetha kanjani isiteshi sezulu.
1 Izinhlobo zeziteshi zezulu
1.1 Iziteshi zesimo sezulu se-Analog
1.2 Iziteshi zezulu zedijithali
2 Ukusetshenziswa kweziteshi zezulu
3 Ziyini iziteshi zezulu ze-wifi?
3.1 Ngoba zibalulekile?
Izinhlobo zeziteshi zezulu
Emakethe sithola izinhlobo ezimbili:
Iziteshi zesimo sezulu se-Analog
Yizona ezilula ukuzisebenzisa, futhi ezingabizi kakhulu. Bakutshela izinga lokushisa, ingcindezi yasemkhathini, izinga lomswakama okwamanje, usuku nesikhathi. Isiteshi, sithi, "sokuhambahamba endlini." Ukusetshenziswa kwayo kunembile kakhulu futhi akudingi noma yiluphi uhlobo lwesondlo, ngaphandle kokushintsha amabhethri njalo lapho ephela.
Intengo iyahluka ngokuya ngohlobo lomkhiqizo, kepha ukukunikeza umbono, amanani ashibhe abiza kakhulu nge- 20-30 ama-euro.
Iziteshi zezulu zedijithali
Bangabaceliwe kakhulu phakathi kwabalandeli, futhi akumangalisi ukuthi njengoba unabo ungabona ukushisa (kokubili okuphezulu nokuncane), ingcindezi yasemkhathini, umswakama (ubuningi, ubuncane nobamanje), isivinini somoya nokuqondisa, ukuphola komoya, isibikezelo sezulu, usuku nesikhathi, inkomba yombani i-ultraviolet, futhi futhi ungazi ukuthi mangaki amamilimitha wamanzi awele ngenxa yegeji yemvula. Okuyinkimbinkimbi kakhulu kunohlelo olufakwe kwikhompyutha oluzokuvumela ukuthi ugcine irekhodi layo yonke idatha eqoqiwe.
Intengo iyahluka ngokuya ngomkhiqizo nemodeli, futhi ingakubiza cishe I-200 euro. Lezi eziyinkimbinkimbi kakhulu zibiza okuningi, cishe ngama-euro angama-500.
Ukusetshenziswa kweziteshi zezulu
Iziteshi zesimo sezulu azisetshenziswanga kuphela ukwazi ukuthi isimo sezulu sinjani namuhla nokuthi singenzani ezinsukwini ezimbalwa ezizayo. Imininingwane eqoqwe ibaluleke kakhulu ku- funda isimo sezulu sendawo ngayinye futhi ubikezele izinguquko ezingaba khona lokho kungenzeka esikhathini esizayo. Isimo sezulu sinomthelela obalulekile empilweni yabantu, ngakho-ke, nasempilweni yabo yansuku zonke, eyomuntu kanye neyomsebenzi.
Ukukunikeza umbono, kufanele wazi ukuthi:
Ukwazi isikhathi kusengaphambili kuvumela umlimi ukuthi azi ukuthi angayihlwanyela nini imbewu yakhe.
Singakwazi ukwandisa izimo zezulu zezikhungo zethu ngokuya ngezimo ezingaphandle.
Uma sibheka isimo sezulu, izingozi zomgwaqo zingancipha kakhulu.
Kepha kunjalo, ngalokhu kubalulekile ukwaba imininingwane nge-Intanethiokungukuthi, thola isiteshi sezulu se-wifi.
Ziyini iziteshi zezulu ze-wifi?
Yizo lezo unekhono lokugcina idatha yesimo sezulu kumaseva angaphandle usebenzisa ifu. Kunconywa kakhulu, ngoba ngemuva kokulanda uhlelo lokusebenza ku-Smartphone yethu, uzokwazi ukubheka imininingwane noma nini lapho sifuna khona. Ungathola imininingwane eminingi ku- Isiteshi Sezulu
Lezi ziteshi zizokusiza ukwazi isimo sezulu endaweni yangakini futhi uyiqhathanise naleso esiseduze nawe, futhi lokho akusho ukuthi ngokubheka kuzoba lula futhi kube lula ukubikezela ukuthi isimo sezulu sizokwenzani. Ngaphezu kwalokho, ungabelana ngemininingwane yakho nabantu abanokuzilibazisa okufana nokwakho, noma ngabe ukude nge-Smartphone yakho. Ungathola eminye imininingwane ku- Isiteshi Sezulu
Ngakho-ke, ulindeni ukuthola eyodwa? 🙂
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Izinsimbi Zomkhathi » Ungasikhetha kanjani isiteshi sezulu?
Ukutadisha okusha kokukhuphuka kwamazinga olwandle